२०७८ जेठ २४ सोमबार २३:५२:००
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । तर, सरकारका पक्षबाट अदालतलाई पनि आफ्नै पेवा ठानेर अनेक किसिमको दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ । त्यसको कसरी सामना गर्ने र गठबन्धनमा अघि कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ । प्रदेशहरूमा सहकार्यको विषय पनि छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको रिट निवेदनउपर इजलास गठनकै प्रक्रियामा सरकार पक्षबाट दबाब सिर्जना गरिएको निष्क(र्षसहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले यसको भण्डाफोर गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । ‘सरकार पक्षबाट न्यायालयमा जे–जस्तो हर्कत भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, प्रतिरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति छ,’ छलफलबारे जानकार एक शीर्ष नेताले भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेताहरूबीच अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि भइरहेको विकासका विषयमा समीक्षा भएको बताए । ‘मुद्दा अदालतमा छ, तर ओलीजीले अदालतलाई पनि आफ्नै पेवा ठानेर अनेक किसिमले दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ, त्यसको कसरी सामना गर्ने र गठबन्धनमा अघि कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भयो,’ सहमहामन्त्री डा. महतले भने ।
प्रदेश २ सरकारको फेरबदलका विषयमा देउवा र प्रचण्डसँग छलफल गरेर उपसभापति निधि जनकपुर गएका थिए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार नबन्ने र केन्द्रकै जस्तो प्रदेश सभा नै विघटन हुन सक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन गर्नुपर्ने प्रयासका विषयमा समेत नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।